Izindleko ezingezona ezejwayelekile ezingezona ezejwayelekile - i-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Izintambo ezingezona ezejwayelekile Izinga elingavamile
Amabherethi ama-plane ayizintambo ezinezintambo kanye ne-cylindrical roller enobumba obuphambene nendawo, ehlukaniswe ngama-bearle roller bearings kanye nama-bearings angama-spherical plain. Indima yalo ukugcina inaliti ye-needle ne-cylindrical roller flat. Uma isetshenziselwa ngokuhlanganyela nama-washers ahlukene, kukhona inhlanganisela ehlukene yezintambo. Inzuzo ukukhulisa ubude bokuxhumana phakathi kwedivayisi kanye nedivayisi, ukuze ukuthelela endaweni encane kungathola umthamo omkhulu wokuthwala othwala kanye nokuqina okukhulu. Kodwa futhi kuncishiswe umkhawulo wamandla okufaka isicelo, ukwandisa impilo yayo yesevisi.
Izindinganiso ezingavamile ezilinganiselwe ziyizinga elingavamile noma azihlangabezane nezidingo zobungako bokuthwala, okungukuthi, ukubonakala nobukhulu bokuklama akuhlangabezani nezindinganiso zezidingo ezifanele zokuphatha. Kufanelekile kwezinye izidingo ezikhethekile zemishini, ngoba ubukhulu buhlukile ezidingweni zokulinganisa okujwayelekile, kufanele kutholakale abanye abakhiqizi abathwalayo, ukukhiqizwa kwenani lamatches, futhi ukuklama kunamaphesenti, ngakho-ke akuyona into ejwayelekile Ukuphatha amanani ngokuvamile kubiza. Ezinye zezingxenye zalo, ezifana nobukhulu bebhola, kufanele zihlelwe ngokwezifiso ezithile.
(Ukuletha umhlangano) amathiphu kanye nokuqapha (ukushisa)
Kungakhathaliseki ukuthi ama-bearings afakiwe afaka kanjani ngokunembile ukunemba, isikhathi eside nokusebenza kwamabherethi. 'sebenzisa izinduku zethusi kanye nokufakwa kombhalo
Lena indlela elula yokufaka ama-bearings amancane naphakathi. Lapho i-ring yokungaphakathi yangaphakathi ihambisana kahle, indandatho yangaphandle yokwedlula kakhulu ngenduku yethusi eduze ne-ring bearing inner end, ngesando ngqo hit the induku yethusi, ngokusebenzisa ithusi yethusi induku, ukubeka kancane efakwe kwi shaft. Ukufaka indandatho yangaphakathi ikhudlwana, ungasebenzisa izinduku zethusi eduze kwendandatho yangaphakathi ephethe umjikelezo we-uniform force, ugweme nje ukushaya ohlangothini, ungabi namandla amakhulu, ukulinganisa ukulinganisa, ukubetha ngobumnene ukufakwa okufakwe kancane, ukuze ungafaki ukufakela okuncane I
• sebenzisa umkhono ukufaka le ndlela kanye nokusetshenziswa kwamathanga okhedu ukufaka isizathu esifanayo. Kuyi-sleeve ngokuqondile ekupheleni kokuthwala kokuthwala (okubhekwe emgodini lapho ingaphakathi langaphakathi kwendandatho yangaphakathi; efakwe emgodini wegobolondo lapho i-ring yangaphandle iphelile), amandla angenayo ngesandla angasatshalaliswa ngendlela efanayo Ukufakwa kwezingubo kulo lonke ubuso bendandatho, futhi kungasetshenziswa ngokubambisana nomshini wokunyathelisa, umzamo wokufaka kanye nesikhathi sokulondoloza, ikhwalithi enokwethenjelwa. Umkhono osetshenziselwa ukufakwa kufanele wenziwe ngensimbi ethambile (ithusi noma ithusi ephansi ye-carbon steel). Uma ukufakwa kufakwe emgodini, ububanzi bomunwe kufanele bube buncane kakhulu kunephephabhuku 1-4mm, ububanzi obungaphandle buyingcosana kune-diameter yangaphakathi, noma ubukhulu be-sleeve, ubukhulu bungalinganiswa ukuphakama kwendandatho yangaphakathi kwendandatho 2 / 3-4 / 5, futhi zombili iziphetho zomkhono kumele kube flat kanye perpendicular kuya emgqonyeni. Uma ukufakwa kufakwe emgodini wokuhlala, ububanzi bomunwe kufanele bube buncane kunomkhawulo wokulinganisa.
Landelela i-Roller Bearings Imodi ye-Scroll Down